12 Waxyaabood oo ay tahay inaad sameyso kadib markaad qorto qoraal Blog ah
Waxaan ka qornay maqaal faahfaahsan sida loo sameeyo ku hagaaji boostadaada soo socota. Tani infographic ka socda DivvyHQ, Codsiga kalandarka tifaftirka ee ka madaxbannaan warqad-xaashi, wuxuu maraa tallaabooyin qaar si kor loogu qaado waxyaabahaaga ka dib markii la daabaco.
Shayga kaliya ee aan xoogaa ka labalabaynayo ayaa ah weydiinta qorayaasha kale inay ku dhiirrigeliyaan waxyaabahaaga. Haddii aad qorto waxyaabo aad u wanaagsan, qorayaal kale doono la wadaag… Waxaan dareemayaa inay xoogaa edeb darro tahay kaliya in la weydiiyo. Waxaan ku badali karaa sheygan dhiirrigelin la bixiyay. Isticmaalidda 'StumbleUpon Ads', Daawadan, ama nidaam kale ayaa ka heli kara waxyaabahaaga la ogaado lana wadaago.
Tags: kor u qaadista boostadakor u qaadista bartakor u qaadida boostadakor u qaad boostadaada
Nov 17, 2016 saacadu markay tahay 10:40 PM
Ma jirtaa wado lagu daabaco sawirkan? Waxaan jeclaanlahaa inaan kushaqeeyo markaan dhajinayo.
Nov 19, 2016 saacadu markay tahay 9:47 PM
Waxaa laga yaabaa oo kaliya daabacaadda ah muuqaal muuqaal ah, ka dibna CTRL-P si aad u daabacdo! Halkaas ayaan ka sameeyay xiriir si aan uga furo daaqad cusub.